Festival Moudjangaya M’chimé : Tafakatra ny Ascb, Ascut, Cosfa ary Cospn -
AccueilSongandinaFestival Moudjangaya M’chimé : Tafakatra ny Ascb, Ascut, Cosfa ary Cospn
Festival Moudjangaya M’chimé : Tafakatra ny Ascb, Ascut, Cosfa ary Cospn
11/05/2018 admintriatra Songandina 0
Tonga amin’ny tsontsori-mamba hisarahana ireo ekipa efatra tafakatra hiatrika ny lalao manasa-dalana amin’ny « Festival Moudjangaya M’chimé» eo amin’ny taranja basikety, sokajy N1A lehilahy. Hetsika mizotra amin’izao fotoana izao ao Mahajanga, ao amin’ny Complexe Sportif. Tafakatra hiatrika ny lalao manasa-dalana ny Ascb Boeny, ekipan’ny mpampiantrano sady mpikarakara ny hetsika, ny Ascut Atsinanana sy Cosfa Analamanga, ary ny Cospn Analamanga. Hangotraka, araka izany, ny lalao manasa-dalana amin’ity andiany voalohan’ny hetsika ity. Saika hanala amin’ny Ascb sy ny Ascut mantsy ny Cospn sy ny Cosfa. Raha ny marina dia ny Ascb hidona amin’ny Cospna, ary ny Ascut hifanandrina amin’ny Cosfa. Ekipa efa samy nifandona avokoa ireo, saingy mbola tsy nahazo fandresena nanoloana ny Ascb sy ny Ascut ireo ekipa mpifanandrina aminy ireo. Na izany aza anefa, dia samy hanao izay ho afany hiakarana amin’ny lalao famaranana ireto ekipa efatra tafakatra amin’ny dingan’ny manasa-dalana ireto. Tsiahivina fa efa nihaona tany amin’ny fifanintsanana ireo ekipa ireo, ka ny Ascb efa nandavo ny Cospn, ary toraka izany koa ny Cosfa, efa resin’ny Ascut. Hanala vela izany ireto ekipa roa ireto amin’io manasa-dalana io.
Ankoatra izay, hiatrika ny lalao famaranana mandroso kosa ny BBCM Analamanga sy ny Sélection Boeny anio, eo amin’ny sokajy « vétérans » lehilahy. Eo amin’ny taranja beach soccer indray, dia mitana ny laharana roa voalohany ao amin’ny vondrona « Antsahambingo » i Morondava sy Manakara, raha i Melaky sy Brickaville kosa ny ao amin’ny vondrona «Baobab » ilany. Mety mbola hiova kosa io filaharana io aorian’ny andro farany amin’ny fifanintsanana anio. Marihina fa fotoam-pakana aina ho an’ireo ekipa rehetra mpandray anjara, ary niroso tamin’ny fitondrana azy ireo nitsangatsangana naka rivotra teny amin’ny Petite Plage ny mpikarakara tarihin’i Emile Rakotomalala, filohan’ny klioba Ascb Boeny.
Norbert Ratsirahonana : Ampamoakan’i Camille Vital?